IPhone 14 kaliya ee leh eSIM waxay noqon kartaa ikhtiyaar | IPhone News
eSIM-ka kaliya ee iPhone 14 wuxuu noqon karaa ikhtiyaar
Mid ka mid ah hal-ku-dhigyada Apple waa shaki la'aan adduunka. IPhone-ku waa la mid halkan kan konchichina. Laga soo bilaabo waddan ilaa waddan kale, waxa kaliya ee beddelay aaladda waxay ahayd koronto-dhaliyaha, sababo muuqda dartood. Hadda, maadaama uusan xirneyn, xitaa taas. Markaa kafee qof walba.
Laakiin mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee gaari kara iPhone 14 ayaa si toos ah ugu dhacay halbeeggaas adduunka oo dhan. The eSIM. Waxaa jira wadamo aan wali haysan hawlwadeenada mobilada ee taageera SIM-yada casriga ah, taas oo dhabar jab ku ah Apple, oo rabtay in ay ku soo bandhigto eSIM iPhone-yada soo socda. waxay noqon doontaa?
Waxaa jira warar xan ah oo sheegaya in Apple uu qorsheynayo in soo socda iPhone 14 waxa kaliya oo ay la shaqeysaa eSIM, sida ay horayba ugula shaqayn jirtay aaladaha kale ee LTE, sida Apple Watch. Laakin sida badanaa dhacda, hawl wadeenada taleefoonada ayaa aad uga dambeeya soosaarayaasha aaladaha.
Waxay hore u dhacday markii Apple ay soo saartay markii ugu horeysay Apple Watch LTE. Spain waxaan ku qasbanaay inaan sugno dhowr bilood ilaa hawlwadeenada taleefanada ugu waaweyn ay habeeyaan nidaamkooda si ay u awoodaan inay suuq geeyaan eSIM-yada casriga ah. Waxay igu dhacday Movistar, gaar ahaan.
Waxaana jira wadamo ay telefoonadooda gacanta ku hayaan wali ma iibiyaan kaararka eSIM muuqaal ah. Taasi waa sababta dhowr xanta ay jecel yihiin midka ku saabsan falanqeeyaha Globaldata, Emma Mohr-McClune, waxay tilmaantay in Apple ay qorshaynaysay inay soo saarto iPhone 14 kaas oo ku shaqayn doona eSIM kaliya, balse uu shaki ka qabo.
Markaa waxa uu qabaa fikradda ah in Apple laga yaabo in ay soo saarto qalab noocan oo kale ah, kaas oo ka shaqeeya kaliya SIM-yada casriga ah, laakiin way noqon doontaa Hal ikhtiyaar. Sida ikhtiyaarka lagu dooranayo wifi ama wifi + iPad-ka gacanta. Tani waxay xaqiijinaysaa in wadamada aan eSIM-yada aan wali la suuqgeyn, iPhone 14 loo isticmaali karo nano-SIM-ga caadiga ah.
Wadamadaas ay hawl wadeenada taleefoonadu bixiyaan ayaa lagu yidhi eSIM Virtual, isticmaaluhu wuxuu kala dooran karaa iibsashada iPhone 14 sida kuwa hadda, nano-sim, ama mid aan lahayn booska caadiga ah si loo geliyo kaarka, loo diyaariyey kaliya eSIM. Waan arki doonaa sida ay wax u dhamaadaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 14 » eSIM-ka kaliya ee iPhone 14 wuxuu noqon karaa ikhtiyaar
Yaan la na sirin! Qaar ka mid ah farqiga u dhexeeya AirPods Pro dhabta ah iyo kuwa been abuurka ah
Podcast 13x17: Xanta badan iyo warar yar